Cilmi Baadhayaal Ka Digay Khatar Ay Sheegeen In Ay Ka Imin Karto Geela Bariga Africa Iyo Sobobta – Borama News Network
Mid ka mid ah xayawananada ay khubarada sida weyn isha ugu hayaan – aadna uga cabsi qabaan – waa geela.
“Qof walba oo geela dhaqda ama xiriir taabasho la sameeya wuu ku dhici karaa cudurka ay qabaan,” ayey tidhi.
“Sababta aan daraasaddan uga billownay Kenya waa tirada geela ee aadka ugu badan waddankan. Waliba gaar ahaan deegaanada ismaamul goboleedka Marsabit,” ayey tidhi Minayo.
Mexico:- Kooxo Hubeysan Oo Weerar Gaadmo Ku Geystay Khasaaro Nafeed Iyo Tirada Dadka Dhintay
Waa Kuma Siyaasiga Hadii Uu Qabto Talada Turkiga Ay Reer Galbeedku U Barooran Doonaan Ordogan?
Wasiir Qambi Oo Soo Bandhigay Magaalooyin Shiidka Iyo Mudaharaad Kala Horyimd